10ka ugu sarreeya Anime Waifus - Cradle View
by Alak Chaipatana 22nd July 2021 21st September 2021
Leave a Comment 10ka sare ee Anime Waifus ugu fiican
Dhammaanteen waan jecelnahay Anime iyo gudaha Anime, jilayaasha qaarkood ayaa ka sarreeya kuwa kale sababo kala duwan awgood. Waifu waxaa lagu qeexaa si dabacsan inuu yahay dabeecad khayaali ah oo daawadaha ama taageeruhu u hayo meel kalgacal ah oo gaar ah. Dabeecad ay aad u jecel yihiin, xitaa haddii sababta jacaylkooda iyo jacaylka ay u qabaan, aynu nidhaahno, ceeb ama sababo aan loo baahnayn. Markaa annagoo aan laba-labayn dheeraad ah aan galno 10ka ugu sarreeya Anime Waifus ee aragtida guud ee Cradle View.
10. Isuzu Sento oo ka socda Amagi Brilliant Park
Dadka qaar ayaa u arki doona ceeb in ay liiskan ugu sarreyso balse fadlan na maqal. Isuzu waxay ahayd mid laga dareemay jirkeeda iyo aura in badan oo ka mid ah qaybaha Amagi Brilliant Park waana tan sababta loogu tixgeliyo inay tahay Anime Waifu ugu fiican. Si kastaba ha ahaatee, Anime-ka dabeecadeedu aad buu u caajisay oo caajisay, kaliya waxay haysataa dhinacyo warqado khafiif ah oo dabeecadeeda ah oo aan u isticmaali karno si aan ugu naxariisano. Iyo sidoo kale in ay guud ahaan ahayd mid naxdin leh mararka qaarkood taas oo ka dhigaysa dabeecadeeda si aad u adag in la daawado qaar ka mid ah daawadayaasha Anime oo uu ku jiro qoraaga DIMA, oo qoray a Dib u eeg Qodobka ku saabsan Amagi Brilliant Park soo laabashada Juun 2020, oo aad akhrin karto halkan
9. Saeko Busujima oo ka socota Dugsiga Sare ee Dhimashada
Liistada Anime Waifu ma dhammayn doonto la'aanteed jilaa ka tirsan taxanaha Dugsiga Sare ee Dhimashada, taasi waxay noqon doontaa wax lagu qoslo! Imaanshaha at 9 liiskayaga waa Saeko Busujima, ardaydii dugsiga sare ee aadka u kululayd iyo katana-ku-jiidashada, zombie-dilka, quruxda naf-badbaadinta oo ka soo muuqatay muuqaalkeedii ugu horreeyay qaybta koowaad marka ay badbaadiso nolosha Anime Waifu kale, Shizuka Marikawa. Dhammaan Waifus taxanahaas waa kuwo kulul, si kastaba ha ahaatee, Busujima waa tan ugu casrisan, ugu sharafta badan, ugu soo jiidasho badan uguna macquulsan kooxda. Qaado Ka muuqashada Busujima ee liiskan sida calaamadda waxyaalaha wanaagsan ee iman doona.
8. Hakufu Sonsaku ee Ikki Tousen
Akhristayaasha qaar waxaa laga yaabaa inaadan aqoon u lahayn Ikki Tousen iyo Hakafu laakiin marka la soo koobo, Anime-ku wuxuu ku saabsan yahay magaalo u kala qaybsan qaybo badan oo ka mid ah akadeemiyada dagaalka kuwaas oo dhamaantood ku tartamaya inay noqdaan lambarka 1. sheekadu dabcan waxay raacdaa jilaageena ugu muhiimsan Hakafu oo aan marka hore ku aragno qaybta hore. Waxaan hubnaa marka aad aragto taxanaha inaad ogaan doonto sababta ay u tahay Anime Waifu wanaagsan.
Aynu nidhaahno Xakafu maaha qalabka ugu fiiqan ee daadsan laakiin awoodeeda dagaal waa mid cajiib ah. Haddii aad waligaa fursad u haysato inaad daawato taxanahan waxaan kugula talineynaa inaad sameyso. Waa daawasho aad u wanaagsan waxaana jira hawlo badan oo adeega taageere ah, gaar ahaan jilayaasha muhiimka ah. Hakafu waxba kama duwana, aad bay u qurux badan tahay waxayna leedahay muuqaal jireed cajiib ah. Dabeecaddeeda aan waxba galabsan ayaa sidoo kale ka dhigaysa mid soo jiidasho leh maadaama ay caadi ahaan u aragto dadka ugu fiican xitaa marka ay ku dhow yihiin inay dilaan!
7. Madaxweyne ka socda Ha i Caylin Miss Nagatoro
Madaxweynaha ha ii xoogsheegin Miss Nagatoro ayaa hubaal ah inay indhahaygu qabteen waxaana ku aragnay dhammaan Instagram-ka iyo Facebook-ga, iyo sidoo kale TikTok. Laakiin tani waa sabab wanaagsan? Waqtiga shaashada ee madaxweynaha ayaa ah mid aad u yar oo ah Ha i xoogsheegin Miss Nagatoro wada hadalkeeduna dareen badan ma helayo. Ilaa iyo intii ka dambaysay dhacdada iyada oo lagu sawiray gabal faneed la sameeyay, waxa la wada ogaa in Madaxweynuhu aad loo jecel yahay Waifu.
Waxay u badan tahay dabeecad qof walba si uu u ogleeyo, sida goobta uu Senpai rinjiyeeyo. Dhammaanteen waan xasuusannahay muuqaalkaas. Ujeedadu waa haddii aad aragtay Anime-kan markaas waxaad hubaal ka xasuusan doontaa madaxweynaha taxanaha sidoo kale, taasi waa hubaal.
6. Sayuki Tokihara oo ka yimid HenSuki
Hadda haddii aad si toos ah u daawatay HenSuki ilaa dhamaadka, waxaad shaki la'aan baran doontaa Sayuki, ardayga indhaha soo jiidaya, oo leh qalbi weyn. Mid ka mid ah dhacdooyinkii hore, waxaan ku aragnaa Sayuki oo u qirtay Keiki inay tahay "qalloocan masochistic adag" oo kaliya oo raba in ay maamusho "milkiileheeda" iyadoo rajeynaysa inay dhammaystirto khiyaaligeeda sirta ah. Sayuki waa ka badan yahay Anime Waifu oo kaliya, in kastoo, ay tahay maalgaliyaha waqti buuxa ee taxanaha, iyada la'aanteed, HenSuki ma noqon lahayd mid caan ah sida hadda?
Sayuki waxay leedahay cod jilicsan, dabeecad la jecel yahay, iyo bas weyn oo dhamaantood ka dhigaya booskeeda tan in ka sii badan. Haddii aad hesho wakhti aad ku daawato HenSuki, markaa quruxdan quruxda badan ayaa hubaal ku siin doonta dhoola cadeyn haddii aad raadineyso meelaha saxda ah!
5. Rias Gremory oo ka socda Dugsiga Sare ee DXD
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu tilmaami karo iyada, Shaydaanka Qabiilka Gremory, Ilmo Kulul Sigaar Sigaar cabba, Mucaarid Dagaal Adag oo leh dhinac daryeel jacayl leh. Waxaa jira sababo badan oo ay tahay Waifu weyn iyo hubaal Waifu oo aad loo jecel yahay oo ay leeyihiin taageerayaasha Anime.
Rias timo cas oo qurux badan, cod dejin jilicsan, dabeecad qoran oo cajiib ah, iyo waxqabad heersare ah oo dhan ayaa ka dhigaya mid u qalma liiskan iyo xoog culus oo lagu tiriyo Anime Waifu World.
4. Yuri Honjo oo ka socda duulaanka Highrise
Qaado gabadh dugsi sare ah, sii bastoolad, dhig garoon ay ka buuxaan cadaw wejiyada qarsan oo aan la garanayn ka dibna fadhiiso naso oo ha bilaabato nadiifinta!
Yuri Honjo waa Anime Waifu oo si cadaalad ah u dhawaa Duulaanka Sare kaliya soo baxaya Febraayo 2021. Qoraaga Dima wuxuu qoray maqaal ku saabsan wadahadalka a Xilligii 2aad ee Duulaanka Highrise oo aad akhrin karto halkan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad daawatay Duulaanka Sare Markaa hubaal waxaad baran doontaa Hotshot-ka Dugsiga Sare. Halkaa. Waa muuqaalo badan oo nooca adeegga taageere ah Duulaan sare mana niyad jabi doontid hadday tani tahay waxa aad raadinayso.
Yuri waxay ka soo muuqan doontaa qaybta koowaad halkaasna waxaan ka helnaa fahamka waxa ay ku saabsan tahay. Waxay leedahay shakhsiyad qurxoon iyo astaamo kale oo badan oo la dareemi karo kuwaas oo ka dhigaya inay bannaanka soo baxdo.
3. Nino Nakano oo ka socda Quintuplets The Quintessential
Taageerayaal badan ayaa jecel Quintuplets-ka Quintessential waana ay fududahay in la arko sababta. Waxaa jira 5 Waifus oo suurtagal ah oo aad ku jeclaan karto bandhigan dhexdiisa marka ay koofiyadda hooseyso, laakiin keebaa ugu fiican? Hagaag, ra'yiga CV, waxaan aaminsanahay inay tahay Nino. Waa ficilada Nino ee Tsundere taas oo ka dhigaysa mid la jecel yahay Anime Waifu liiskan, iyada oo ku sii kululaynaysa jilaha ugu muhiimsan ee Futoro.
Maxaad u waydiin kartaa? Waa hagaag, waa in la sameeyo dabeecadda Nino, oo ka sii muhiimsan halka ay ka bilowdo. Nino wuxuu ku bilaabmaa jilaa Tsundere ah laakiin si dhakhso ah ayuu u diiriyaa jilaagii ugu weynaa ee Futaro. Shakhsiyadda qabow ee bilawga ah oo ay weheliso jirkeeda cajiibka ah ayaa ka dhigaya Waifu caan ka ah liiskan. Waxaan rajaynaynaa inaad ogolaato. Haddii aad xiisaynayso Xilliga 2 ee Quintuplets-ka Quintuplets markaas fadlan guji halkan.
2. Hitagi Senjougahara oo ka socda Taxanaha Monogatari
10ka Anime Waifus ee ugu sareeya
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu tilmaamo Senjougahara - adag, cabsi la'aan, naxariis iyo qallafsanaan ayaa ahaa kuwa hadda maskaxda ku soo dhacaya laakiin dabeecadeeda ayaa la jecel yahay sababo badan. Waa wax ka badan in lagu sameeyo dabeecadeeda marka loo eego qaabka ay u egtahay. Sababtu waxa weeye in dhinac ka mid ah ay leedahay dabeecad aad u qabow oo ay u ekaan karto mid cabsi badan mararka qaarkood, laakiin dhinaca kale, waxaa jira waqtiyo ay aad u niyad-jabiso oo naxariis badan, xitaa waxay noqon kartaa is-hoosaysiin iyo is-xakameyn marka xitaa aysan ku habboonayn iyada. inay sidaa ahaato. Si kastaba ha ahaatee, iyadu wali waa mid ka mid ah Anime Waifus ugu fiican ee jira, shaki kuma jiro.
Haddaba waa maxay sababta ay sidan u tahay? Maxaase iyada kaga duwan jilayaasha kale ee liiskan ku jira? Hagaag, waa aurageeda iyo dhaqankeeda. Timaheeda guduudan ee dhaadheer ee ay ku bedeshay taxanaha ayaa ah sifo kale oo la dareemi karo, waxayna ku soo kordhinaysaa dabeecadda gaarka ah ee dabeecadeeda, taasoo ka dhigaysa inay tahay musharaxa ugu sarreeya liiskan.
1. Yukana Yame oo ka socda saaxiibtayda kowaad waa Gal
Shaki la'aan, Yukana waxay leedahay wax walba, soo jiidasho, naxariis, naxariis, iyo jir la yaab leh iyo sidoo kale in kor loo qaado! Iyadu si dhab ah ayay ugu fiican tahay liiskan sida Anime Waifu oo waxay noqon doontaa tartan weyn xitaa haddii aysan ahayn lambarka 1. Yukana marka hore waxay ka soo muuqanaysaa Qaybta 1aad ee Xaajimete no Gal markii ay weydisay jilaagii ugu weynaa Junichi.
Dhib malahan waxa aad ka taagan tahay Yukana waa, been ma sheegi kartid waxay sifo ku leedahay aagagga oo dhan sababtaas awgeed, waxay ku jirtaa liiska dadka ugu sarreeya iyo tan.
Waad ku mahadsan tahay akhrinta Maalin wanaagsan. Fadlan ka fiirso iibsashada qaar ka mid ah badeecada View Cradle View si ay gacan uga geysato taageeridda abuurayaasha goobta iyo qorayaasha Muuqaalka Cradle.
Gelitaan Hore Meelaha ugu Fiican ee Bilaashka Anime ee Bilaashka ah Luulyo 10
Gelitaanka Xiga Miss Kobayashi's Dragon Maid - daqiiqado qosol leh